I-Old English Sheepdog: Ingabe inja ethandekayo ethandekayo ingaba nolaka? - Izinhlobo
I-Old English Sheepdog: Ingabe inja ethandekayo ethandekayo ingaba nolaka?
Inkulu futhi ifana nebhere, i-Old English Sheepdog (OES) ebukekayo iyinja enhle kakhulu yokwalusa nenja yasemapulazini eyaziwa ngengubo yayo ehlukile.
Akunandaba ukuthi ukubiza kanjani lokhu okumsulwa - Bob, UDrover ‘S Dog, Altenglischer Schäferhund, kanye ne-Old English Sheepdog - kungumdondoshiya othungayo owenza umngane omkhulu womndeni.
Kepha kukhona okunye okwengeziwe kule pooch elula? Ingabe kufanele uyithole? Qhubeka ufunde ukuthola!
Yavelaphi i-Old English Sheepdog?
Ngabe ibukeka kanjani i-Sheepdog endala yesiNgisi ngaphansi kwalobo boya?
Isimo: Ingabe izinja zezimvu ezindala zesiNgisi zilungile izinja zomndeni?
Ungayinakekela kanjani i-Sheepdog yakho ethandekayo yase-Old English
Ngabe izinja zezimvu ezindala zesiNgisi zinezinkinga eziningi zempilo?
Kubiza malini i-Old English Sheepdog?
I-Bearded Collie VS. Inja endala yezimvu yesiNgisi
Ngubani okufanele athande i-Old English Sheepdog enakekelwa kahle?
Ukufunda Okuqhubekayo: Izinhlobo ezifanayo ze-Old English Sheepdog
Imvamisa ibizwa ngokuthi 'i-Bobtail,' i-Old English Sheepdogs ingenye yezinhlobo zezinja zaseBritish Isles.
Yize kuthiwa zakhiwa ezifundeni zaseSomerset naseDevon, kanye naseDuchy of Cornwall entshonalanga yeNgilandi, azisona isiNgisi ngokuphelele ngegazi.
Empeleni, leli gama le-fido liyigama elingaqondile ngoba abakhulile ngempela njengoba bebelokhu bekhona kusukela ngasekupheleni kweminyaka ye-1700.
Abanye futhi bakholelwa ukuthi banamadlozi angezona izinja zezimvu njenge I-Russian Owtchar / Ovtcharka , I-Deerhound , Briard , IBergamasco , kanye nezinye izinhlobo zaseYurophu, nezaseScotland.
I-OES yayikhona kudalelwe ukuthi kube drovers , ukuhambisa izinkomo emadlelweni ziye ezimakethe . Ingubo emhlophe noluhlaza okwesibhakabhaka nayo ibiwusizo kubelusi ekwenzeni intambo ngokusikwa kwabo.
Ngisho nangomlando ongacacile, uhlobo lwe-Old English Sheepdog lwabonwa ngobunjalo babo nokubukeka kwabo, okwabafaka eringini lombukiso.
Ngekhulu le-18, lolu hlobo oluhlanzekile luye lwaboniswa ngabathengisi bezimpahla futhi bebelokhu beya emicimbini kusukela ekuqaleni.
Le nja esebenza yabhaliswa ne-American Kennel Club (AKC) ngo-1888 ngaphansi kwe- Iqembu lokwalusa . Ngo-1904, i- I-Old English Sheepdog Club yaseMelika yadalwa.
Ekugcineni, ngo-1914, bangena embuthanweni womnqobi weWestminster Kennel Club.
Izinja ezindala zezimvu zesiNgisi azikhawulelwanga emisebenzini yasensimini nasemicimbini yokuhlanganiswa, noma kunjalo.
U-OES kaPaul McCartney ogama lakhe linguMartha ugqugquzele ingoma ethi 'Martha My Dear' yiBeatles, futhi baphinde badlala kumabhayisikobho afana neDisney's I-Shaggy D.A. futhi Inja eyiShaggy .
Uyamkhumbula umlingani ka-Prince Eric we-canine ku I-Mermaid Encane ? Lokho kuyi-OES, futhi!
Ngokuya nge- I-AKC ejwayelekile yokuzala , Izimvu zezimvu ezindala zesiNgisi zinokwakhiwa okuhlangene nokuyisikwele, okukhombisa ukuthi ziyinja eqinile futhi elinganiselayo.
Zingaba zinkulu futhi zibe nemisipha, kodwa zishesha kakhulu. Banezimfanelo ezibonakalayo ezibasizayo ukufeza imisebenzi engafunwa ngummeli noma umalusi.
I-OES inengubo ejiyile enamandla okwenza kube nzima ukutshela ukwakheka nosayizi womzimba wayo. Ukudonsela emuva bonke lobo boya, uzobona inhloko enkulu, eyisikwele nempumulo esilinganisweni esiphakathi.
Ngokuvamile banayo amehlo ansundu noma aluhlaza okwesibhakabhaka , kepha inhlaka nephuzi kungenzeka. Amakhala abo ahlala emnyama futhi ahlala evelele phakathi koboya babo obushubile.
Kungenzeka kungabonakali ngoba kuhlangana nayo yonke ijazi labo, kepha banezindlebe eziphakathi nendawo.
Ukuphakama nesisindo: Zingakanani izinja ezindala zezimvu zesiNgisi ezikhulayo?
I-OES ime Amasentimitha angama-21 nangaphezulu , nesisindo cishe amaphawundi angama-60 kuye kwayi-100 (27 kuya ku-45 kg).
Izinja zezimvu zesilisa ezindala zesiNgisi zinokuphakama okungenani okungamasentimitha angama-22 (56 cm), ngoba njengamanye ama-canines, abesilisa ngokuvamile baba bakhulu kancane kunabesifazane .
Akuvamile izinhlobo ezinkulu nezinkulu ukuvuthwa kancane, okubandakanya le English Sheepdog.
Bafinyelela ekukhuleni kwabo ngokugcwele lapho benonyaka owodwa , kodwa basengagcwalisa baze babe neminyaka emibili kuya kwemithathu ubudala.
Futhi noma ngabe i-OES isezingeni eliphakathi nendawo noma elikhulu, lolu hlobo lwenja oluhlanzekile yi inja enkulu efulethini , inqobo nje uma ithola ukuhamba nsuku zonke nezikhathi zokudlala.
Uma uzibuza ukuthi ngabe kukhona yini ama-Old English Sheepdogs amancane, akhona, kodwa noma kunjalo kudalwe kusuka ekuzaleni ama-runts noma ngokuwaxuba nolunye uhlobo oluncane .
Isibonelo esisodwa yi-miniature Imvu yezimvu , okuyisiphambano esiphakathi kwento encane noma ithoyizi Poodle kanye ne-Old English Sheepdog.
Ngabe izinja zezimvu ezindala zesiNgisi zinoboya noma izinwele?
I-Old English Sheepdog ine- izinwele ezinamahloni, ezimahhadlahhadla nezinwele ijazi elikabili lokho akunamanzi futhi kuwela phansi.
Ijazi labo langaphandle elihlotshisiwe nengubo yangaphansi ethambile, enosilika ibanikeza ukubukeka kwabo okuhlukile.
Kunemibala eminingi kakhulu yamajazi ehlotshaniswa ne-Old English Sheepdog okunzima ukuyilandela, kepha i- mpunga, ukuqhuma , luhlaza okwesibhakabhaka noma ukuhlangana okuluhlaza okwesibhakabhaka amajazi ajwayelekile kakhulu .
Kodwa-ke, okuluhlaza okwesibhakabhaka nokumhlophe, okuluhlaza okwesibhakabhaka, no-fawn nomhlophe nakho kujwayelekile.
Okunye ukuhlanganiswa kombala okungenzeka kufaka:
Blue Gray futhi White
IBlue Merle noMhlophe
Izinja ezalusa izimvu ezindala zesiNgisi ziqala ukukhombisa iminyaka yazo lapho sezimpunga nxazonke uneminyaka engu-3 noma ngaphezulu . Ukumakwa okumpunga nokumhlophe kuqala ukuvela kancane, kepha amanye ama-OES angahle abe nalokhu kumakwa.
Yize i-Old English Sheepdog inomsuka wayo njengohlobo olusebenzayo, lezi unothando futhi uyadlala usofa amazambane yizilwane ezifuywayo ezinhle zomndeni.
Bathanda noma ngubani nawo wonke umuntu futhi bayakujabulela ukuhlala besondelene namalungu omndeni wabo wokuthwebula.
I-OES inezinga lamandla aphakeme ngendlela emangalisayo futhi ingabadlali abadlala nabo abahle kakhulu. Ngenxa yokuvuthwa kwabo kancane ebudaleni, bona gcina ukudlala kwabo isikhathi eside eminyakeni yabo yegolide .
Izinja ezindala zezimvu zesiNgisi zingajabulela ukudlala okuntekenteke, kepha zikhetha ukwangana okukhulu nezilwanyane ezinde.
Uzodinga zigcine zibandakanyekile ngokomzimba nangokwengqondo ngoba ubuhlakani babo bungabafaka enkingeni ngokushesha.
Qiniseka ukuthi ufaka i-pup yakho emidlalweni yezinja ukuze ihlale isebenza, noma ithathe uhambo olude, igijime futhi igijime izikhathi nsuku zonke. Ungafundisa lezi zinja ezinkulu ukubhukuda!
Ngabe izinja zezimvu ezindala zesiNgisi zinolaka?
Kuyaqabukela ukuhlangabezana ne-OES enolaka ngoba isimilo sabo esimnandi sizokhanya ngapha nangapha kwezinye izinja namakati.
Noma kunjalo, basenayo umlindi izimfanelo lokho kubenza bavikeleke, ngakho-ke bangakhonkotha kakhulu kubantu abangabazi ngaphandle kokuhlangana okufanele.
Inja kaDrover has ukhakhayi olukhulu ukudlula ukuluma kwazo. Uma kukhona, basaba nje ukuthi umuntu abangamazi uzothatha abathandekayo bakhe ahambe ngoba bona unenkinga yokuba wedwa .
I-Old English Sheepdog iyakuzonda ukushiywa yodwa futhi ingakhula ukukhathazeka ngokwehlukana ngokushesha.
Yini engaba khona ukukhefuzela kwabo kuzwakala kakhulu kunokukhonkotha kwabo . Ukuhefuzela okunye kuvamile kuzo zonke izinhlobo, kepha i-Old English Sheepdog izokhefuzela kakhulu ngoba ithwele ijazi elikhulu loboya.
Naka izinga labo lokunethezeka, bese ubapholise ngamafeni namanzi uma kushisa kakhulu.
I-Old English Sheepdog ine phezulu ukuqeqeshwa futhi uhlakaniphe ngendlela eyisimanga , kodwa isimo sabo esihle nesinomusa sisho ukuthi ngeke zihambe kahle ngokuqiniswa okungekuhle.
Bagcine bezungezwe umndeni futhi ubadumise njalo ukuze bahlale bejabule.
Izinja zezimvu ezindala zesiNgisi zilungiswa kakhulu futhi zidinga izidingo ezikhethekile zokuzilungisa. Futhi bayizinja ezinamandla amakhulu ezidinga ukudlala okuningi okubandakanyayo.
Ngaphandle kwalokho, bangahle babe nokukhuluphala nezinye izimo zempilo uma ungaqapheli.
Ijazi le-OES lijwayela imvelo yabo futhi lingasinda ebusika obunzima kanye nasehlobo elifudumele. Vele unciphise uboya babo esimweni sezulu esiswakeme ukugwema ukushisa ngokweqile.
Ngabe izinja zezimvu ezindala zesiNgisi zidinga ukuzivocavoca okuningi?
Ama-Bobtails angabelusi abasebenza kahle abachitha isikhathi sabo esiningi begijima, bedlala futhi behola umhlambi. Kubalulekile ukuthi uhlangabezane nezidingo zale nja ephile kahle emzimbeni.
Njengoba zikhula, i-Old English Sheepdog izophenduka izinja ezinkulu zethanga, kepha lokho kusasele iminyaka engu-8.
Qala ukudlala nomdlwane wakho we-OES ngokushesha okukhulu. Yenza ngcono izidingo zabo zokuzivocavoca uze ushaye ihora elilodwa kuya kwamabili ngosuku .
Izinja zezimvu ezindala zesiNgisi zingahlala phansi kakhulu, ngakho-ke bheka ezingeni lamandla azo ngezikhathi zokudlala.
Gwema ukudlala ukulanda neminye imisebenzi ye-cardio lapho kushisa, kepha izilwane ezifakiwe , ukudonsisana, nokuhlafuna amathoyizi kuhlale kuhlu lwalolu hlobo olukhulu.
Uyinciphisa kanjani i-Old English Sheepdog?
Ukulungisa ama-OES kuyinselele. Ngincoma ukuba ubungane nomkhwenyana ohlukile ngoba kuthatha cishe Amahora ama-3-4 ngesonto ukugcina izinwele zabo ezi-shaggy zisesimweni se-tip-top.
Uzodinga usizo lokufunda ukuthi ungawaxubha kanjani, ngakho-ke hlala ukhuthele kuyo yonke impilo yengane yakho.
Uma ufuna inkambo yokuphahlazeka yokuthi ungayilungisa kanjani i-OES, bukela ividiyo elandelayo:
Imbuzi Yezimvu YesiNgisi Esidala kuchitha okuningi , yingakho bona akuzona hypoallergenic . Zidinga ukuxubha nsuku zonke ukugcina ingubo yazo ingangeni futhi isuse izinwele ezifile.
Uzodinga invest in a coarse steel comb, pin brush, kanye ne-slicker brush . Yiba mnene futhi ungadonsi uboya be-OES, futhi uhlale uxubha esikhunjeni.
Kungumqondo omuhle ukufafaza i-detangler noma i-conditioner eboyeni babo ngaphambi kokukama ukwenza isilwane sakho sikhululeke.
Kufanele usebenzise i-OES yakho ijwayele ukuzilungisa ngesikhathi sobuntwana. Ngaphandle kwalokho, ingxenye enkulu yempilo yabo izogcwala ubuhlungu benhliziyo.
Lokhu kufaka phakathi ukuxubha amazinyo nokucheba izinzipho zabo kabili ngesonto nokuhlanza izindlebe masonto onke.
Geza izintshevu zabo njalo noma njalo emva kokudla ngoba imilomo yabo ingaphenduka iphuzi kubo inani elikhulu le-droo l.
Ungafaka futhi i-cornstarch lapho bese uhlanza okweqile ngemuva kokuthi seyomile. Geza yonke ijazi labo njalo lapho uphuma uye emasontweni ayisishiyagalombili noma uma kudingeka.
Uma ungafuni ukubhekana nokuzilungisa, ungagunda i-Old English Sheepdog yakho phansi kanye noma kabili ngonyaka. Uboya bazo buyakhula To ”kuya ku-1 ″ ngenyanga , yinqume njalo uma ufuna ukugcina lokhu kubukeka.
Noma kunjalo, gcina izinwele zomdlwane zide ukuze uzijwayeze abantu abadlala ngoboya babo.
Ingabe izinja zezimvu ezindala zesiNgisi zidla kakhulu?
I-Old English Sheepdog idla nje ngokulingana kohlobo olukhulu noma olukhulu futhi ayaziwa ngokudla noma ngokudla ngokweqile.
Ngenxa yamajazi amakhulu we-Old English Sheepdogs, kunzima ukusho ukuthi akhuluphele ngokweqile noma okhuluphele . Ngenkathi uzilungisa, hlola isisu sabo ukuqinisekisa ukuthi bahlala esisindweni esinempilo.
Thatha i-OES yakho uye kudokotela wezilwane njengoba bekhula bezosiza balinganisa ukudla abakudingayo nokwabo izinga lamandla .
Inani eliphakanyisiwe lansuku zonke le-Old English Sheepdog ngu 2.5 kuya ku-4.5 izinkomishi ze ukudla okomile okuseqophelweni eliphezulu ngosuku , ihlukaniswe kabili.
Ukuze uthole uhlelo lokudla oluthe xaxa olususelwa kulolu hlobo lobude obuhlukahlukene nesisindo, zinike Izinkomishi ezi-3 zenkomishi yokulinganisa eyi-8 OZ ngosuku, kabili ngosuku uma benesisindo phakathi Ama-60-69 lbs (27.2-31.2 kgs).
Faka enye ½ inkomishi ngamakhilogremu ayi-10 ongeziwe (ama-4.5 kgs).
I-OES Puppy yakho izodinga i- Ukudla okwenziwe i-puppy ngoba bayazuza Amakhilogremu angama-60 onyakeni wabo wokuqala . Shintsha ukudla kwabo kwenja ngemuva konyaka nohhafu.
Gcina zonke izinja nemidlwane yabantu abadala kude nokudla komuntu ngaphandle kwalapho kunconywa udokotela wezilwane wakho. Gcina ukuphatha inja kube okungenani.
Izinja zezimvu ezindala zesiNgisi izindaba zezempilo zishayekile futhi zikhumbula .
Kubalulekile uku impilo screen isilwane sakho Ukuhlolwa kwe-hip, ukuhlolwa kwe-thyroid, ukuhlolwa kwe-ophthalmologist, noma ubuze umfuyi wakho ukuthi aqinisekise lezi zivivinyo.
I-EIC DNA nokuhlolwa kokuzwa nakho kuyasiza.
I-hip dysplasia , izimo zamehlo ezinjenge-retrophy retrophy eqhubekayo ( FOR ), i-cataract ne-retinal detachment , i-hypothyroidism, nokungezwa kuvamile futhi kungavela kuyo yonke impilo ye-OES.
Qiniseka ukuthi uhlanza izindlebe njalo njengokushaywa yisithulu.
Ezinye izindaba zezempilo ezihlobene ne-Old English Sheepdog zifaka:
I-cilia dyskinesia eyinhloko
Ukuwa okubangelwa ukuzivocavoca
I-Immune-Mediated Hemolytic Anemia (IMHA)
Ukuzwela kuzidakamizwa ezithile (ngenxa yohlobo lwe-MDR1)
I-Old English Sheepdog inesilinganiso seminyaka yokuphila ebekiwe Iminyaka engu-10-12 , okude izinhlobo eziningi ezinkulu. Ungakwazi ukunweba isikhathi sabo sokuphila ngokuzivocavoca okuningi nokuvakashelwa kaningi kwezilwane.
UBob uya ngokuya evama kakhulu njalo ngonyaka, ngakho-ke kungaba yinselele ukuthola injana endala ye-English Sheepdog evela indawo yokuhlala, umfuyi, noma ukutakulwa kwasendaweni endaweni ye- I-united states .
Uma uthola eyodwa, kuzodingeka ukhiphe imali eningi kukho konke ukuphila kwabo.
Kodwa-ke, ukukhokhela eyodwa ngaphambili akubizi kangako $ 1000- $ 2000 , okuyintengo emaphakathi yenja enosayizi ophakathi nendawo.
Uzothola i-OES ngokuthengiselana, kodwa uzobuka lokho kukhuphuka kwentengo ukuhambisana nezidingo zabo zokuzilungisa kanye nezindleko zokudla.
Lo mdlwane ohlanzekile kungakhuphuka ngentengo okuba kakhulu , kepha manje uzodinga nje ukucubungula ezinye izindleko ezifana nemali yokuthumela, indawo yokuzalanisa, ukuthandwa kwekennel, negazi.
Izinja eziningi zezimvu ezindala zesiNgisi zivela ezinja zokubonisa.
Izinja zezimvu ezindala zesiNgisi zinodoti ojwayelekile we Imidlwane engu-5-8 , kodwa angakhuphuka aze afike kwayi-11 ngenxa yobukhulu obukhulu bohlobo.
Ngenkathi kunokuningi okumele sikuthande nge-Old English Sheepdog (ngokoqobo), baba uhlobo lwezinja olungajwayelekile ngenxa yejazi labo lokugcina kahle.
Manje basengcupheni yokuqothulwa, njengoba bangu-384 kuphela ababhaliswe ngo-2018, a Ukwehla ngama-67% eminyakeni engama-20 edlule .
Ungamthola kanjani umfuyi we-Old English Sheepdog
Bambalwa kakhulu abalimi be-Old English Sheepdog, kepha yini okumbalwa okukhona okuzinikele kulolu hlobo.
I-OES ine- umugqa omude we abalimi abahloniphekile ezigcina lezi zidlwane ezinhle zisondele ezinhliziyweni zazo. Noma kunjalo, hlala wazi ukuthi izigayo ze-puppy zisekhona.
Njalo cela umfuyi ukuthi imiphumela yokuhlolwa kofuzo ngoba i-Old English Sheepdog ithambekele ezinkingeni eziningi zempilo.
Vakashela ikennel ukubona isimo sabo jikelele ngoba i-OES engajabule izokhala kakhulu, ithukuthele futhi ixwaye abantu ongabazi.
Kuyifulegi elibomvu uma umfuyi enqaba ukukhombisa amarekhodi ezempilo noma izakhiwo zawo. Bobs badinga ukuzivocavoca okuningi, ngakho-ke hlola egcekeni labo izimpawu zokugijima.
Ungathola imidlwane ye-Old English Sheepdog edayiswa kulezi zindawo:
Izinja zezimvu ze-Old English zeHaystac (Churchville, NY)
IBugaboo Old English Sheepdog (IColorado Springs, CO)
Izikhungo ezindala zokutakula nezokutholwa kwabelusi bezimvu endaweni yangakini
Noma kunzima ukuthola umfuyi we-Old English Sheepdog, ngeshwa kulula ukubona lolu hlobo ezindaweni zokusindisa noma zokutholwa .
Abaningi abazilungiseli amajazi abo asezingeni eliphezulu nezidingo zamandla aphezulu kusengaphambili, okuholela ezinzaneni eziningi ezingenamakhaya.
Izinja zezimvu ezindala zesiNgisi kukhona bahlakaniphe ngendlela eyisimanga futhi bayabathanda abantu , ngakho-ke ngeke babe nenkinga yokuzivumelanisa nomndeni wakho omusha.
Ngenkathi ungeke uwahlole ezempilo, kungenzeka ukuthi i-OES yakho izohlala iphilile kukho konke ukuphila kwabo ngenxa yezindinganiso zabo eziqinile zokuzalanisa.
Ungazama ukuthola imidlwane ye-Old English Sheepdog ngalezi zingosi ze-locator:
Ukutakulwa Kwezimvu ZaseNew England Old English (ILincoln, MA)
Ukutakulwa Kwezimvu ZaseNgilandi endala (ISanta Monica, CA)
I-Texas Old English Sheepdog Rescue (ETexas, e-USA)
Hlangana noHamish, uCollie Onentshebe. Umthombo wesithombe
Zingaba nemvelaphi efanayo nobuso nemizimba embozwe ngoboya, kepha lezi izinhlobo ezimbili zezinja ezihlanzekile.
Kuthuthukiswe eScotland futhi kwafuywa ukufuya imfuyo, I-Bearded Collies (AKA Izintshebe, Argle Bargle noma Izinwele ze-Mou’ed Collies ) kukhona incane kune YEBO .
Le Mountain Collie inobude obungamasentimitha angama-51 kuye kwangama-22 (amasentimitha angama-51 kuye kwangama-56) kuphela, nesisindo samakhilogremu angama-20 kuye kwangama-55 (20 kuya kuma-25 kg).
Ekhuluma ngezilinganiso, I-Bearded Collies ube nesikhathi eside isikhathi sempilo - iminyaka engu-12 kuya kwengu-14.
Futhi ngokubuka nje isithombe, le canine ijazi libushelelezi , futhi itholakala ngemibala embalwa. Umsila wayo nawo mude impela, ngokungafani ne-OES, lapho zingazalelwa khona ngaphandle kowodwa.
I-Old English Sheepdog iyi- iguquguqukayo, ihlakaniphile futhi inesizotha othanda zonke izinhlobo zabantu, ngisho nabantu ongabazi, ngokuxhumana nabantu okufanele.
Izinhliziyo zabo ezinkulu ziyabenza elilungile izilwane ezifuywayo zomndeni , kepha ukuthambekela kwabo ekubukeni kubenza babe ngabasebenza kanzima.
Zilungiselele ukukhonkotha, ukuvuza amathe, nokuzilungisa okuphezulu kanye nezidingo zokuzivocavoca umzimba , noma uzoba neresiphi yenhlekelele.
Gcina i-pup yakho ibungazwa ngokudlala okuningi , futhi ubaqeqeshe kusenesikhathi, ukuze bangeqisi kuwo wonke umuntu odlula emnyango wakho.
Yize isimo se-Old English Sheepdog sibenza babe bakhulu kubanikazi bokuqala, ukuzilungisa kwabo okuphezulu namandla kuyabenza ilungele abanikazi bezinja abafisa ukuvelela kuphela .
Ucabangani nge-Old English Sheepdog? Ingabe uthandana nale teddy bear enkulu? Sibonise okwakho YEBO ngezansi uma unolunye lwalezi zinhlobo ezingavamile!
IPolish Lowland Sheepdog
Izindlela Zokuqeqesha Izinja: Yikuphi Okufanele?
Umalusi Omncane waseJalimane: Ingabe Zikhona Lezi Zinja Eziyisayizi Ephaketheni?
ilebhu emnyama nomxube womgodi
Inja yendabuko yaseMelika indian hypoallergenic
izithombe zemidlwane yetiacup chihuahua
uhhafu german Shepard uhhafu wolf